4 ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug oo qaadacay doorashada | Caasimada Online
Home Warar 4 ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug oo qaadacay doorashada
4 ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug oo qaadacay doorashada
Dhuusomareeb (Caasimada Online) – Afar ka mid ah musharaxiinta u sharaxan Xafiiska Madaxtooyada Galmudug ayaa ka horyimid jadwalka Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne Kuxigeenka, uu soo saaray garab ka mid ah Guddugii Doorashada ee Talaadadii kala qaybsamay.
Musharaxiinta kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa), Cabdullaahi Faarax Wehliye, Cabdi Cabdullaahi Axmed (Cabdi Dheere) iyo Kamaal Daahir Guutaale oo lagu tiriyo musharaxiinta mucaaradka ayaa si rasmi ah uga horyimid jadwalka.
War saxaafadeed ay xalay soo saareen ayay ku sheegeen inay Dowladda Federaalka garab gaar ahi u afduubtay hannaanka maamul u samaynta Galmudug, taasina ay tahay mid aan la aqbali karin.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inaanan la tixgelin cabashadii musharaxiinta ee ku aadaneyd in kow iyo labaatan maalmood dib loo dhigo doorashada, sababo ku aadan iyagoo aan weli fursad u helin inay la kulmaan Xildhibaanada, sidoo kalena aan la tixgelinin heshiisyadii horey loo wada gaaray.
Musharaxiintan ayaa waxay ku taliyeen in laga gudbo sharciyaynta garab gaar ahi loogu afduubayo Guddiga Doorashada, sidoo kalena uu Guddoonka Baarlamaanka Galmudug ka shaqeeyo mideynta Guddiga Doorashada, ee labada garab u kala jabay.
Go’aankan ayaa waxaa loo arkaa mid xoojinaya khilaafka ba’an ee wiiqay geedi-socodka dhismaha Galmudug-ta cusub, taasoona ay eedeyda ugu weyn qaadi doonto Dowladda Federaalka.
Haddii Dowladda Federaalka loo wakiishay maamul u samaynta dadka reer Galmudug ayay dadku ku doodayan ay ahayd inay Doorashada Galmudug la dhigto mid daahfuran, bedelkii ay garab gaar ahi taageeri ugu muujin laheyd.